Mayelana - BikeHike
Uyawathanda amabhayisikili, ukuvakasha kwamabhayisikili nohambo lwamabhayisikili?
Umbono wewebhusayithi - amabhulogi
I-BikeHike iyinkundla lapho mina, umthandi webhayisikili kanye nokuvakasha kwamabhayisikili ikakhulukazi, ngabelana ngolwazi oluwusizo ngezihloko ezifanayo.
Ngasikhathi sinye, umbono wesiza ukwenza abantu abanezintshisekelo ezifanayo bakwazi ukuhlanganisa, ukuxhumana nokwabelana ngolwazi ikakhulukazi ngamabhulogi.
Lona umehluko omkhulu ovela kumaforamu, lapho kungekho khona ukusebenza okulula kokuziveza, lapho ungakha khona isihloko, ungazikhipha ohlwini, kodwa konke lokhu kuzohlakazeka ezindaweni ezivulekile. Nathi, yonke imicabango yakho kanye nemibono yesikhathi esihle izogcinwa endaweni eyodwa. Unesikhala sakho siqu, ofuna ukwabelana ngaso nabanye, isibonelo, ngokunikeza umngane isixhumanisi, noma ufuna ukusishiya sodwa nawe. Ngapheka itiye, ngathatha amabhanisi, futhi ngesikhathi sasebusika obubandayo uyakhumbula ukuthi wawunesikhathi esimnandi kanjani ehlobo. Uthele i-cola eqhweni ngosuku olushisayo lwasehlobo futhi uqabuleke njengoba ufunda uhambo lwakho lwasebusika.
Lolu uhlobo lwedayari yomuntu siqu, ethunyelwa kuphela emphakathini wabantu abanomqondo ofanayo, ngenxa yokuthi izothola impendulo ejabulisayo.
Ukuze wenze lokhu, udinga nje ukubhalisa, emva kwalokho ungaqala ibhulogi yakho yomuntu siqu.
Ukulungiselela uhambo lwebhayisikili
Isayithi liqukethe ulwazi, okuthi, ekuqaleni, likukhuthaze ukuthi uhambe ohambweni lwakho lokuqala lwebhayisikili, bese likutshela ukuthi uzilungiselele kanjani. Lapha uzofunda ukuthi iyiphi indlela yebhayisikili okufanele uhambe nayo, yini ozohamba nayo, indlela yokupakisha, indlela yokuthutha ibhayisikili lakho, ukuthi yini ongayipheka, njll.
Ngeke siyizibe indaba yokukhetha ibhayisikili nezinye izingxenye, izesekeli, izinto zokusebenza. Ngokwesibonelo, iyiphi ikhamera engcono ukuthatha uhambo? Nalapha kuningi okumele kuxoxwe.
Qhubeka. Ukuze ukugibela ibhayisikili kube yinzuzo futhi kungabi yingozi empilweni, kufanele uzijwayeze indlela yokugibela ibhayisikili, ukhethe usayizi webhayisikili futhi wenze ukulingana okulungile.
Yiqiniso, kufanele ukwazi ukulungisa ibhayisikili ngezandla zakho, uyigcine futhi uyinakekele. Izihloko zethu zizokusiza futhi ukuba uthole amakhono anjalo awusizo.
Uma uthanda isayithi, uma ubona ithemba ekuthuthukisweni komphakathi wabalandeli bemisebenzi yangaphandle, amabhayisikili, ukuvakasha kwamabhayisikili nokuhamba ngebhayisikili, bese ujoyina, umeme abangani, ushiye isixhumanisi sesayithi, lapho kungenzeka khona, bese singakwazi thuthukisa ngenkuthalo, wandise indlela yokuphila enempilo, yebo futhi "impilo izoba ngcono, impilo izoba mnandi kakhulu"
Konke okuhle kanye nenhlanhla!